မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်း၊ သင်္ဘောလိုင်းနှင့် ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းများအတွက် စံနမူနာများ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၂
• ဗီယက်နမ်ရောက် မြန်မာပရိုဖက်ရှင်နယ် အင်ဂျင်နီယာ
ကိုပြေတယောက် ဗီယက်နမ်ကို (၂) ပတ် သင်္ဘောတစင်းမှာ Innert Gas System ကော်မရှင်နင် အလုပ်လုပ်ဖို့ ရောက်လာတယ်။ ဟိုချီမင်း မြို့ကို စင်ကာပူက လေယဉ်ဆိုက်ပြီး၊ ချက်ချင်း နောက်လေယာဉ်တစီးဆက်စီးပြီး Da Nanag မြို့ကိုရောက်တယ်။ ဟိုတယ်မှာ တည်ခိုပြီး သင်္ဘောရပ်ထားတဲ့သင်္ဘောကျင်းကို သွားရတယ်။
သင်္ဘောကျင်းထဲဝင်ရတာတော့ လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်္ဘောက ရေထဲရပ်ထားတော့ ကရိန်းကြီး၊ ပစ္စည်းသည်တဲ့ ချင်းတောင်းထဲ လူ (၂၀) လောက် စီးပြီး၊ မော်တော်ဘုတ်ပေါ်ကို လူတွေသယ်ပေးရတယ်။ အသဲတယားယားနဲ့ပါ။ နောက် မော်တော်ဘုတ်ကို ထပ်စီးရတော့ South China Sea က မုန်တိုင်းလေထန်ချိန်ဆိုတော့ စက်လည်ပတ်ရေးအတွက် ဗီနာရှင်း သင်္ဘောကျင်းကို ၁၉၉၆ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစမှာ တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၃နှစ်ကြာမှ သင်္ဘောကျင်းတည်ဆောက်မှုပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ဟွန်ဒိုင်း ကိုးရီးယားနဲ့ ဖက်စပ်သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၁ နောက်ပိုင်းမှာ တနှစ်ကို သင်္ဘောအကြီးစား ၂ စင်းလောက် Docking & Repair လုပ်ငန်းစခဲ့ပြီး၊ သင်္ဘောအသေးများစွာ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၀မှာတော့ ဗီယက်နမ်ရေနံလုပ်ငန်းလည်း တိုးတက်လာတော့ ရေနံတင်သင်္ဘောကြီးများစွာ၊ ရုရှားနဲ့ဖက်စပ် ရေနံတူးစင်၊ ရေနံတူးတဲ့ သင်္ဘောများစွာ ပြင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းများ လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဟွန်ဒိုင်း ကိုးရီးယားက ဖက်စပ်လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဗီ ယက်နမ်အစိုးရက လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများမှာ အရှုံးများစွာ ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းတောင် ဒေ၀ါလီခံရမဲ့အခြေအနေ ဖြစ်လာလို့ Patro Vietnam ဆိုတဲ့ ရေနံရောင်းစားတဲ့ အမြတ်ထွက်တဲ့ အစိုးရကုမ္ပဏီက ကျားကန်၊ ၀ယ်ယူပေးရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီ Harmworthy ဆိုတဲ့ ဘွိုင်လာမီးခိုးနဲ့ Inert Gas စနစ်ကို သင်္ဘောအတွက်ဝယ်ပြီး ဗီယက်နမ်တွေပဲ တပ်ဆင်ကြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်က ဗီနာရှင်းသင်္ဘောကျင်းက ဆောက်တဲ့ သင်္ဘောကြီးတစင်း ပရိုဂျက်။ အစိုးရပိုင်သင်္ဘောဆိုတော့ အာဏာပိုင်များ၊ အာဏာပြိုင်နေတာနဲ့ မပြီးနိုင်ဘူး။ စင်ကာပူမှာ ၂ နှစ်နဲ့ပြီးစီးမဲ့ သင်္ဘောဟာ အခု ၆ နှစ်ကြာတဲ့အထိ ဆောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု ၆ နှစ်ကြာမှ ပြီးပြီဆိုတော့ စင်ကာပူ Harmworthy က မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ ကိုပြေ တယောက်တည်း Commission လာလုပ်ပါတယ်။ စင်ကာ ပူ၊ ကိုးရီးယား၊ တရုတ်ပြည်မှာဆို သင်္ဘောတစင်း အမြန်ဆောက်ပြီး၊ ၂ နှစ်အကြာ ကုန်တင်၊ ပြေးနိုင်တော့ နောက် ၃ နှစ်လောက်ဆို အရင်း ကြေသွားလေ့ရှိပါတယ်။ အခုတော့ ၆ နှစ်ကြာလည်း သင်္ဘောကြီးက အိပဲ့၊ အိပဲ့နဲ့ မပြီးနိုင်ဖြစ်နေတယ်။
ဗီယက်နမ် အလုပ်သမား၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ အလုပ် အင်မတန်လုပ်တယ်လို့ ကိုပြေက ပြောပြပါတယ်။ သင်္ဘောပိုင်တာက ဟိုချီမင်းမြို့နားက ဗီနာရှင်းသင်္ဘောကျင်း၊ သင်္ဘောတပ်ဆင်တဲ့နေရာက ဟိုချီမင်းမြို့နဲ့ မိုင် ၄၀၀ ကျော်ဝေးတဲ့ Da Nang ဆိုတဲ့ ဗီယက်နမ်အလယ်ပိုင်း ဆိပ် ကမ်းမြို့။ ကိုပြေကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးဖို့ သင်္ဘောကျင်းက ဗီယက်နမ်အင်ဂျင်နီယာ ၂ ယောက် ထည့်ပေးတယ်။ အရမ်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပဲ။ သင်္ဘောအင်ဂျင်နီယာ၂ ယောက်က အသက် ၃၂ နှစ်၊ ဗီယက်နမ်မှာ တခုတည်းသော ရေကြောင်းသိပ္ပွံတက္ကသိုလ် Maritime University က ဘွဲ့လွန်၊ မာစတာဘွဲ့ပိုင်ရှင် ၂ ယောက်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကိုကူညီဘို့ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် စက်ပြင်လေးတွေလည်း အရမ်းကြိုးစားပြီး၊ တပ်ဆင်၊ ဖြုတ်တပ်လုပ်ပေးကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ဗီယက်နမ်မှာ ၂ နှစ်နဲ့ပြီးရမဲ့ အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့ သင်္ဘောကြီး ၆ နှစ်ကြာအောင် အကြီးကျယ်ရှုံးပြီး လုပ်နေရတာ အလုပ်သ မားတွေ အလုပ်မလုပ်လို့ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ဗဟိုဦးစီးမှု များလွန်းပြီး အာဏာပြိုင်နေကြတော့ ဌာနအချင်းချင်း သူ့စောင့်၊ ငါ့စောင့်နဲ့ ကြာသွားကြောင်း၊ လပ်စားလို့လား Corruption ကိစ္စကြောင့် ရှုံးသလား မေးစရာရှိပါတယ်။ စားတာတော့ စားမှာပေါ့။ သို့သော် လူတွေ အများကြီး ၀ိုင်းလုပ်တဲ့ သင်္ဘောသစ်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ လပ်စားလို့တော့ သိပ်မလွယ်တော့၊ အာဏာပြမယ်၊ ပစ္စည်တွေ မလိုလားအပ်ပဲ ၀ယ်မယ်၊ သုံးမယ်၊ ဖြုန်တီးမှုကြောင့်လို့ ပြောရပါမယ်။
အဲဒီ Da Nang မြို့မှာ ရေနံချက်လုပ်ငန်း၊ စက်ရုံတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ရေနံတူးလုပ်ငန်းလည်း အများကြီး၊ ဗီယက်နမ် အင်ဂျင်နီ ယာများဟာ လစာငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ထက်တော့ ပိုမရကြပါဘူး။ တကယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ကျတော့ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ရုရှား၊ ကိုးရီးယား စတဲ့ Equipment Maker တွေကပဲ လာလုပ်သွားကြတယ်။ ဗီယက်နမ်အင်ဂျင်နီယာလေးများက Operation & Maintenance တွေပဲ လုပ် ကြပါတယ်။ ဈေးချိုတဲ့ ပြည်တွင်းအလုပ်သမားတွေကို လွယ်တဲ့နေရာတွေမှာပဲ လုပ်ခိုင်းကြပါတယ်။
• ဖက်စပ်စနစ် Joint Venture
နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးများကတော့ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းနဲ့ပဲ စတင်ရပါတယ်။ အစိုးရက လူအင်အား၊ မြေနေရာ၊ စွမ်းအင်၊ လေ၊ ရေနဲ့ Facility လုပ် ပိုင်ခွင့်၊ အခွန်လျှော့ပေးခြင်းများကို ပေးမယ် ၅၁ ရာနှုန်း သတ်မှတ်ပြီး၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီက နည်းပညာ၊ စက်ပစ္စည်း၊ ကျွမ်းကျင်သူ၊ စက် အပိုပစ္စည်း၊ ကုန်ကြမ်းအချို့အပြင် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းဝယ်မဲ့သူ Marketing များကို တာဝန်ယူကြပါတယ်။ သင်္ဘောကျင်း၊ ရေနံ၊ ဓါတ်ငွေ့လိုအလုပ်မျိုးကတော့ Joint Venture အစိုးရနဲ့ ပေါင်ပြီး လုပ်ချင်သူပေါပါတယ်။ ကိုးရီးယား၊ တိုင်ဝမ်၊ စင်ကာပူ သူတို့လည်း သင်္ဘော ကျင်း၊ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးတွေမှာ စက်ပစ္စည်းနဲ့ နည်းပညာမတတ်နိုင်လို့ (ငွေရင်းမရှိလို့) ဖက်စပ်နဲ့ စတင်ပါတယ်။ နှစ် ၃၀ ကနေ နှစ် ၉၉ နှစ်အလွန်ဆုံးပါပဲ။ ဟောင်ကောင်ကျွန်းနဲ့ မကာအိုကျွန်းတို့ကို တရုတ်က ဖက်စပ်ပုံစံငှားရမ်းခြင်း ၉၉ နှစ်စာချုပ် မတရားချုပ်ဆိုခံရပါတယ်။ ဒီလိုပဲ စင်ကာပူက နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများစွာ အလုပ်လုပ်တဲ့ သင်္ဘောကျင်းများ Jurong Shipyard, Keppel Shipyard, Sambawang Shipyard .. ဧရာမသင်္ဘောကျင်းများလည်း ဂျပန်နဲ့ ဖက်စပ်စတင်ရပါတယ်။ နောက် နှစ် ၃၀ ကြာမှ စင်ကာပူအစိုးရ ငွေရှိလာတော့ ဂျပန် ပိုင်ရှယ်ယာများကို ပြန်လည်ဝယ်ယူလိုက်ပြီး စင်ကာပူပြည်သူများပိုင် Public Listed Company အဖြစ် လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဂျပန်နည်းပညာ အထူးသဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှု Management Technique ကို စင်ကာပူအစိုးရက ရအောင်ယူလိုက်ပါတယ်။ သူများဆီက ပညာရဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က ပညာအခြေခံရှိမှဖြစ်တော့ စင်ကာပူအစိုးရက လူငယ်ပညာတတ်များကို ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ဂျာ မဏီ၊ ပြင်သစ်၊ နောက်ဆုံး အစ္စရေးအထိ ပညာတော်သင်များ၊ State Scholars များကို နှစ်၂၀ စီမံကိန်းနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ပါတယ်။ Human Resource is the Best Investment ဆိုတာ မြန်မာအစိုးရမျိးတောင် သိပါတယ်။ လက်တွေ့လုပ်ဖို့ကတော့ မလွယ်လှပါဘူး။ ကိုယ့်လူချည်းပဲ ..ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဝင်ချည်း ရုရှားနိုင်ငံကို ပညာသင်စေလွှတ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ်လိုနိုင်ငံမျိုး သိပ်မတိုးတတ်တာ မဆန်းလှပါဘူး။
ဘယ်လိုဖြစ်စေ.. ဖက်စပ်စနစ်ဟာ အနှစ်၂၀ ကျော်သွားရင် နိုင်ငံပိုင်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယားများလည်း အနှစ်၂၀ ငွေရင်းနှီးပြီး၊ အမြက်များစွာ ရရှိသွားကြတယ်။ တရုတ် ဗီယက်နမ်များလည်း သင်္ဘောကျင်းနဲ့ သင်္ဘောအဟောင်းများကို အပိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ Management နည်းစနစ်ကို ဂျပန်၊ကိုးရီးယားများထံမှာ ရအောင်မယူနိုင်ရင်တော့ လွှဲပြောင်းယူပြီး ကုမ္ပဏီ ဒေ၀ါလီခံရမလို၊ အရှုံးပြသွားတဲ့ ဗီယက်နမ်က ဗီနာရှင်း VINASHIN သင်္ဘောကျင်းကိုလိုမျိုးဖြစ်ရပ်တချို့တလေ အနာဂတ်မြန်မာပြည်မှာမလွဲမသွေ ပေါ်လာဦးမှာပါ။
၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းမှာ ဗီယက်နမ်ရဲ့ သင်္ဘောလုပ်ငန်း၊ သင်္ဘောပြင်၊ ရေနံတွင်းလုပ်ငန်း၊ ရေနံချက်လုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်လာပေမဲ့ ဖက်စပ်လုပ် ကိုင်ရတော့ အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာ နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီက သူတို့နိုင်ငံက အလုပ်သမားတွေပဲ ခေါ်ပြီးလုပ်စေတယ်။ ဒါမှ မြန် မြန်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်၊ ရောင်းချနိုင်မှာကိုး၊ အရေးမကြီးတဲ့နေရာတွေတော့ ဗီယက်နမ်တွေကို လုပ်စေတယ်။ ဗီယက်နမ်တွေလုပ်ရင် ဌာန တွေ အချင်းချင်း အာဏာပြိုင်ပြီး၊ ဖြုန်းတီးမှုတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။
နောက်ပိုင်းတော့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများလည်း ဖက်စပ်မလုပ်ကြတော့ဘူး။ သူတို့ပိုင် ၁၀၀% လုပ်ကြတော့တယ်။ အရင်ကလုပ်ခဲ့တာတွေက တော့ ဆက်လုပ်ပေါ့။
နောက်ဆုံး အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင် ဖက်စပ်တွေလည်း သိပ်မရှုံးပါ။ ဗီယက်နမ်တွေချည်းလုပ်တဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ ရှုံးမြဲရှုံးနေပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နည်း၊ ဗီယက်နမ်ဟန်နဲ့လုပ်ကြတော့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို Attitude ကို မဖြောက်နိုင်ကြသေးပါ။ နိုင်ငံခြားသား ၁၀၀% ပိုင်တဲ့ စက်ရုံတွေတော့ ဗီယက်နမ်များစွာကို ခန့်ထားနိုင်ပြီး၊ အမြတ်လည်း ထွက်ကြပါတယ်။
သင်္ဘောလုပ်ငန်းကို ကြည့်ရင် အလွန်အမြတ်ထွက်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ စက်မှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတိုးတက်လာလေ၊ ကုန်သယ်ဖို့ သင်္ဘောလုပ်ငန်းလည်း တိုးတက်လာပါမယ်။ ထို့အတူ ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်း၊ ကွန်တိန်နာသင်္ဘောတွေလည်း အများကြီးလို လာပြီး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ကုန်ပစ္စည်းကို ကိုယ့်နိုင်ငံကုမ္ပဏီရဲ့ သင်္ဘောလိုင်းနဲ့ပဲ သယ်ယူပို့ဆောင်ရင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံး တပြိုင် တည်း တိုးတက်လာကြပါတယ်။
စင်ကာပူမှာ သင်္ဘောကျင်း၃ခုဟာ ကမ္ဘာအမြန်ဆုံး သင်္ဘောပြင်၊ သင်္ဘောဆောက်လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါတယ်။ ကိုးရီးယား၊ ဂျပန်များကို အ ဆင့်မှီပါတယ်။ ရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင်္ဘော၊ ရေနံတူးစင်များကို အဆင့်မြင့် ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ သင်္ဘောလိုင်း Naptune Oriental Line NOL ကလည်း သင်္ဘောပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်ပြီး အလွန်ကြီးပါတယ်။ သင်္ဘောကျင်းများ၊ သင်္ဘောလိုင်များဟာ ဘီလျှံပေါင်းများစွာ တန်ဖိုး ရှိတဲ့ အမြက်အစွန်းကောင်းလှတဲ့ ကုမ္ပဏီများဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ဆို COSCO သင်္ဘောလိုင်းက အနှစ် ၂၀ အတွင်း ကမ္ဘာပေါ် အကြီးဆုံးသင်္ဘောလိုင်းဖြစ်နေပါပြီ။
မြန်မာပြည်က ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလိုင်း ရှိပါတယ်။ ဟိုးတုန်းက COSCO, NOL တို့ မပေါ်ခင်ကတည်းက ဗြီတိသျှတို့ တည်ထောင်ပေးတဲ့ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အနှစ် ၄၀ အတွင်း ဘာမှမတိုးတက်ပါဘူး။ ဗီယက်နမ်က Vietnam National Shipping Line VINALINE သင်္ဘောလိုင်းကလည်း ၁၅နှစ်အတွင်း ဘီလျှံဒေါ်လာ ကုမ္ပဏီဖြစ်သွားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ထိပ်ပိုင်းရာထူးတွေခန့်ပြီး၊ စီးပွားရေးဆန်ဆန်လုပ်ရင်တော့ တရုတ်ပြည်၊ စင်ကာပူ က သင်္ဘောလိုင်းတွေလို အမြက်များစွာရမှာဖြစ်ပေမဲ့၊ အခုတော့ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ထဲက လူတွေအများကြီးခန့်ထားပြီး၊ ကြိုးနီစနစ်နဲ့ ဆိုရှယ်လစ်အာဏာပိုင်တွေပဲ အုပ်ချုပ်နေတော့ တိုးတက်မှုနှေးကွေးပါတယ်။ မြန်မာပြည် က စစ်အစိုးရလက်ထက်တုံးက စစ်ဗိုလ်တွေချည်းပဲလုပ်ခိုင်းတာထက်တော့ တော်သေးပေမဲ့ ထူးမခြားနားပါပဲ။ ကောင်းတာတခုတော့ လူ အင်အား၊ ပေါများလှတဲ့ ဗီယက်နမ် အလုပ်သမား၊ အင်ဂျင်နီယာများစွာခန့်ထားနိုင်တာ အမြတ်တခုပါ။
• မြန်မာသင်္ဘောလုပ်ငန်းများအတွက် နမူနာ
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအကြောင်း ရေးခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကို မြန်မာအာဏာပိုင်များ မကျင့်သုံးဖို့၊ အတိုက်အခံများ လွှတ်တော်တွင်း ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တွေကို ကြံ့ဖွံ့တွေထက် သာအောင်နည်းလမ်းကတော့ ပြည်ပရောက် မြန်မာပညာရှင်များကို အဲန်အယ်လ်ဒီများ အင်အားများစွာ ဖြည့်ဆည်းထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ အခုချိန်ကာလမှာ လုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေ အလွန်များလှပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြည်ပရောက် မြန်မာများ ပြန်လာလုပ်ကြဖို့၊ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့လူအင်အား Human Resources နည်းတဲ့အကြောင်းပြောသော်လည်း၊ လက် တွေ့မှာတော့ အာဏာပိုင်များပဲ၊ သူတို့လူများနဲ့ ဆက်လက်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အရှိန်အဟုန်ကောင်းနေပေမဲ့ အာဏာ ပိုင်များကလည်း သူတို့ အာဏာမြဲအောင် နည်းမျိုးစုံ ရှာကြံပြီး၊ ရတဲ့အခွင့်အရေးကို ခိုးသားငါးရာ စုပေါင်းပြီး ဘောင်ဝင်အောင် ဗီယက်နမ်ပုံစံ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
လုပ်ဆောင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာမှာ လူသိထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်စိမ်း၊ လျှပ်စစ်၊ ကျွန်းသစ်၊ သားငါးလုပ်ငန်း ..စတဲ့ ပြည်တွင်းကုန်ကြမ်းကို ထုတ်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကို အထူးသဖြင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများက ဖက်စပ် (သို့မဟုတ်) အပိုင်လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ စက်ရုံနဲ့သင်္ဘောကျင်းလို Service Industry ကိုတော့ စင်ကာပူ၊ ထိုင်းနိုင်ငံများက ပူးပေါင်း ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်လိုကြပါတယ်။ အနောက် နိုင်ငံများကတော့ တိုက်ရိုက်ဝင်လာတာ သိပ်နည်းပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများကတဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမှာပါ။
သင်္ဘောလုပ်ငန်းအကြောင်း မြန်မာပြည်မှာ သင်္ဘောကျင်း၊ သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း၊ ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘေလိုင်း စတဲ့လုပ်ငန်းများ ဖက်စပ်လုပ် ကိုင်ခြင်းတွေစတင်နေတာ နှစ်တော်တော်ကြာပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ အိပ်ထဲနဲနဲရောက်ပြီး၊ စစ်အစိုးရအရာရှိကြီးများ အိပ်ထဲများများရောက်တဲ့ခြစားမှုကြောင့် မအောင်မြင်တာတွေ၊ အခုအစိုးရအသစ်မှာတော့ ပညာနည်းပါးပြီး၊ အာဏာသုံးအုပ်ချုပ်တဲ့ စစ်ခေါင်း ဆောင်များကို ဝေစုပေးပြီး၊ ပယ်ထုတ်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။
မြန်မာ ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလိုင်း ၀က်ဆိုဒ် www.fivestarship.com
သီလ၀ါဆိပ်ကမ်း Myanmar International Terminals Thilawa (MITT)
Joint Venture with Hutchison Port Holdings (HPH)
ပြည်တွင်းမှာတော့ အခြေခံဖက်စပ်လုပ်ငန်း၊ FDI နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုတ်နှံအဖွဲ့၊ ဦးပိုင်အဖွဲ့၊ ကျပ်ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့၊ စတော့အိတ်ချိန်း ၂၀၁၅ မှာစတင်ရေး စတဲ့လုပ်ငန်းများအပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခြေခံ သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန် ဥပဒေ၊ ရင်းနှီးမြှတ်နှံဥပဒေ၊ ငွေကြေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေ၊ ကုမ္ပဏီဥပဒေ စတဲ့ဥပဒေများကို နိုင်ငံခြားပညာရှင်များနဲ့ ပူပေါင်းရေးဆွဲ၊ ပြဌာန်းနေပါပြီ။
အဲဒီဥပဒေများကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့အတွက် ပြည်ပရောက်မြန်မာပညာရှင်များကို ခေါ်ဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာအင်အားကို သုံးမယ်ပြောပြီး ပြန်လာမဲ့လူများကိုလည်း နေရာမပေးချင်၊ အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်ထဲရောက်လာတဲ့ အင်အယ်ဒီနဲ့ အတိုက်အခံများကို ဘာမှလုပ်ခွင့်မပေးပဲ၊ ထိုင်နားထောင်ခိုင်းထားရင်တော့ နောက် ၁၈ နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာ ယခု ဗီယက်နမ် လိုပဲ ပျော်ပျော်ပါးပါးပဲ ဆင်းရဲနေဦးမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီဖို့ဆိုရင် ပြည်ပရောက်မြန်မာအင်အားကို လမ်းဖွင့်ပေးရင်း၊ လွှတ်တော်မှာ လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အဲန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ကို အခုကတည်းက အာဏာခွဲဝေပေးထားသင့်ပါတယ်။
သို့မှသာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဟာ တောင်ကိုးရီးယားလို တိုးတက်လာမှာပါ။
မြန်မာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့သင့်တော်တဲ့ နမူနာအဖြစ် ဗီယက်နမ်သင်္ဘောဆောက်၊ သင်္ဘော၊ ရေနံတူးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများအကြောင်း တ စိတ်တဒေသ အနည်းငယ်ရေးသား ဝေငှလိုက်ပါတယ်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ရသဆောင်းပါးစုံ, သတင်းဆောင်းပါး, ခေတ်ပြိုင်အတွေ့အကြုံ
6 Responses to မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်း၊ သင်္ဘောလိုင်းနှင့် ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းများအတွက် စံနမူနာများ
Mr kyaw on July 7, 2012 at 7:51 am
I am still working now as an Shipyards Engineer at foreign country .
This is very good and right idea for our country’s future.
The action should be done which all the Myanmar shipping Corporation including shipyards /offshore and marine jobs should be transformed .Meanwhile,The professional guys who can be pereformed and consultent the project planning,building,repair,manpower control,etc….I know that some Engineers is still working at foreign country who have been studied that kowledge .
I believe that we havealot of myanmar Engineers working abroad.They might not be come back without about half of the current salary for the expert jobs eventhough they are willing to work for their country.
The inportent thing is all the decission maker who are the top management guys should be free from under table,can be flexible thinking,need to choose the best ideas ,advise,comments from the subordinates.
In japan,when one of the small problem was occured,They received so many comments that how to solve the problems from the all worker’s experipnce point of views.Then board meeting choose the best solution in time and issued all the factory in country , to be reviewd and to get more effected ideas.
As my conclusion, the ideas from all person need to be appreciated for our future country. Thanks
tin on July 7, 2012 at 10:05 am
နိုင်ငံခြားမှာ လုပ်ကိုင်နေသူတွေကို ပြန်လာပါလို့ ပြောရုံနဲ့တော့ ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း Policy maker တွေက အရင်ဆုံး အကောင်အထည် ဖေါ်ချင်တာတွေကို Project အနေ နဲ့ စတင်ရမှာပါ။ ဒီ project ကို ရှိတဲ့လူတွေက သူတို့တတ်နိုင်သလောက်လုပ်၊ လိုအပ်တဲ့ အကြံအစည်၊ အတွေ့အကြုံတွေကို နိုင်ငံခြားမှာ ရှိတဲ့လူတွေ ဆီက တောင်းရမှာပါ။ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့က ခေါင်းဆောင်ပိုင်း က အရင်ဆုံး သူတို့ကို ဘယ်လောက်အထိနေရာပေးမှာလဲ။ အခွင့်အရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးမှာလဲ ဆိုတာကိုလဲ ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြသင့်ပါတယ်။ ဒီမှာ ရှိတဲ့ အရာကြီးတွေ ရဲ့စဉ်းစားပုံခြင်း တူမှာ မဟုတ်တဲ့ လူတွေကို ဘယ်လောက်အထိ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးမှာလဲ ဆိုတာကို လဲ အရင်ဆုံး စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
VI5 on July 7, 2012 at 6:56 pm
thanks for our country dep;pls wait n see.we can do it more and more .
mg on July 8, 2012 at 9:08 am
စာရေးသူရေ NLD အစွဲမထားပါနှင့်။ အမှန်တကယ်လုပ်နိုင်သူလို.ပဲပြောပါ။ ပါတီ အစွဲမထားသင့်ပါ။ နိုင်ငံရေးအတွက်ရေးတာလား။ နိုင်ငံတော်ရဲ. အရေးအတွက်ရေးတာလား။
Overcome on July 8, 2012 at 6:45 pm
အဆိုးလမ်းနည်းနည်းတော့ရှိမှာပါ မကြောက်ပါနဲ့ ဆက်လုပ်ပါ
အရေးကြီးတာက တာဝန်ရှိတဲ့လူက ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းသိဘို့၊ သိတဲ့အတိုင်း တကယ်လုပ်ဘို့ ဖြစ်ပါတယ်
တာဝန်ရှိတဲ့လူ အဆင့်ဆင့်လိုက်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်၊ DASSK မလုပ်နိုင်ပါ။ မသက်ဆိုင်ပါ။
လေနဲ့ စာနဲ့ လုပ်လို့မရပါ
ပြောင်းလဲဘို့က မဖြစ်နိူင်လောက်အောင် ခက်ပါသလား
သူတို့မှားတဲ့ နည်းလမ်းကို ရှောင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ နည်းကို ရှာဖွေလုပ်နိုင်ပါတယ်
လဲမှာစိုးလို့ လမ်းမလျှောက်ရင် ဘယ်တော့မှ လမ်းမလျှောက်တတ်နိုင်ပါ
တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် Well plan ရှိရမယ်
Witmone on July 20, 2012 at 3:51 am
However, I think (http://www.fivestarship.com) is not Myanmar Five Star shipping as mentioned. It seems to be from India.
Myanmar Five Star shipping is http://mfsl-shipping.com
Feedback from Kyaw Sann